पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपालि महामन्त्री उठ्छु : सहमहामन्त्री डा महत | News Polar
काठमाडौँ । डा. प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो कार्यकाल सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ । संविधानसभा सदस्य उहाँले संविधान निर्माण मस्यौदा कार्यदलको सदस्यका रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ । उहाँसँग परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । आफ्नो पार्टी तथा सार्वजनिकरूपमा समसामयिक एवं राजनीतिक विचारहरू राख्नसक्ने स्पष्ट वक्ताका रूपमा डा. महत परिचित हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएका डा महतसँग महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर राससले गरेको कुराकानीको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
यो नेतृत्व भनेको आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ । जस्तो कि हेर्नु न जनतालाई त्यति धेरै आश्वासन बाँडेर ठूलो सङ्ख्यामा मत ल्याएर आएका कम्युनिष्टहरू पनि तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै आफ्ना आन्तरिक लुछाचुँडी र सत्ता भागले गर्दा आन्तरिक व्यवस्थापन नै गर्न सकेनन् । कम्युनिष्टहरूमा ठूलो विद्रोह र असन्तुष्टि देखियो, सत्ताकै लागि उनीहरूको पार्टीभित्रै के–कस्तो झगडा भयो हामीले देख्यौँ नै । त्यहाँ व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भयो, उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । त्यसको ठिक विपरीत मोडलमा शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई हाँक्नुभयो। बरु आफूले कतिपय कुराहरू छोड्ने तर सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि सहमति गरेर लैजाने मोडेलमा सभापति देउवाले पार्टी हाँक्नुभयो । उहाँले पार्टीमा कसैलाई पनि असन्तुष्टि बढ्ने ठाउँ नदिने बुद्धिमत्तापूर्ण बाटो अवलम्बन गर्नुभयो । यसले पनि हाम्रो पार्टीलाई आजका दिनसम्म एकढिक्का बनाएर राख्न सफल भएको छ । उहाँ एक्लै कहिल्यै अघि बढ्नुभएन । जस्तो कि भन्नु न पार्टीको महाधिवेशनकै विषयमा पनि उहाँप्रति कति आरोप प्रत्यारोपहरू लागेका होलान् तर तिनलाई प्रतिवादमा पनि नउत्रिकन, जवाफ पनि नदिइकन सहेरै उहाँ बस्नुभयो । यो सब पार्टीको एकताकै लागि थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ । उहाँले पर्टीभित्रका सबै खालका विचारहरूलाई सम्मानपूर्वक स्थान दिएर राख्नुभएको छ ।
पार्टीभित्रको यो उहाँको नीति देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । उहाँ कसले के भने भनेर त्यसको पछि–पछि लागेर प्रतिवाद गर्नेतिर कहिल्यै लाग्नुभएन । देशको राजनीति कतातिर गइराखेको छ त्यसको सुक्ष्म यकिन गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो त्यसैले त उहाँले अहिले देशको कार्यकारीका रूपमा नेतृत्व गर्न सफल हुनुभएको छ । जस्तै भन्नु न देशमा नेपाली कांग्रेसको बढी मत भए पनि सांसद सङ्ख्याका आधारले गर्दा कम्युनिष्टहरू सरकार निर्माणमा बलिया थिए । तपाईँले पनि सुन्नुभयो नि उनीहरू अब देशमा ५० वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्थे । तर उनीहरूले यही एउटै कार्यकालको भार पनि थेग्न नसकेर राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई बचाउन देउवा नै आउनुपर्‍यो । हामी त संसद्मा सानो थियौँ । तर पनि नेपाली जनताले त स्पष्टरूपमा कांग्रेसले नै देश हाँक्न सक्छ भन्ने खाँचो महसुस गरे नि । त्यसैले उहाँ नै सरकारको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुपर्‍यो । देशको संसद् बचाउन उहाँ नै अघि सर्नुपर्‍यो । उहाँमा पार्टीमा जस्तै देशमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि मिलाएर लान सक्ने, उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुने गरेकाले नै तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुपर्‍यो भनेका हुन् । त्यसैले अब आउने निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई जिताएर लैजान र पार्टीेभित्रका असन्तुष्टि र विग्रहलाई पराकाष्ठामा लैजान नदिनका लागि नेपाली कांग्रेसमा पनि अबका दिनमा उहाँजस्ता नेतृत्वको आवश्यक छ । उहाँले भनिरहनुभएको पनि छ, त्यतिबेला कम्युनिष्टहरू मिल्दा कांग्रेसले हार ब्यहोर्नुपर्‍यो, अब सभापति भएर पार्टीलाई ठूलो पार्टी बनाउँछु र अबका निर्वाचनमा जिताउँछु । यसका लागि पनि आउँदो अधिवेशनमा उहाँलाई नै जिताउनुपर्छ ।
जस्तो कि पार्टीले मलाई जिम्मा दियो, नेविसङ्घको अघिल्लो कार्यकालको अधिवेशन गराएँ । जुन बडो कठिन अवस्था थियो, तर मैले पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गरेँ, अधिवेशन सम्पन्न गराएँ । पार्टीले कोभिडको समयमा पनि मेरो संयोजकत्वमा कोरोना समिति गठन गर्‍यो र काम लगायो । मैले कोभिड महामारी भनिन । हिमालदेखि तराईसम्म पुगँे र अनुगमन गरेँ, काम गरेँ र पार्टी र सरकारलाई रिपोर्ट पनि बुझाएँ । त्यसैगरी सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी जुन दिइएको थियो, त्यसप्रति पनि मैले न्याय गरेको छु । यस पदको जे–जस्तो गरिमा र जिम्मेवारी हो त्यो मैले कुशलतापूर्वक बहन गरेकै छु ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी विचार जुन बिपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराउनुभएको थियो त्यो विचारलाई पनि हामीले संस्थागत गरेर लैजानु छ । यसका लागि कमीले यो लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई जीवन पद्दति बनाउनुपर्छ । त्यो अभ्यासलाई नेपाली कांग्रेसले घनिभूत बनाउनुपर्छ । उतिबेलै बिपी कोइरालाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको बहस सुरु गर्नुभएको थियो । यसको अर्थ यो हो कि देशमा समृद्धि सिर्जना गर्ने र समृद्धिको पहुँचमा सबै नेपालीलाई पुर्‍याउने नै हो । अबको पार्टीको विचार र बहसलाई हामीले यसतर्फ पनि परिलक्षित गर्नुछ ।
नेपाली कांग्रेसका हरेक नेता कार्यकर्तालाई हामीले काम पाइएन भन्ने नबनाउन हरेक विभागहरू गठन गर्ने, प्रशिक्षण गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने । अहिले ठूलो युवापङ्क्ति पार्टीमा जोडिएको छ उनीहरूलाई सङ्गठन निर्माणमा पूर्णरूपमा लगाउने । यसले नेपाली जनताले कम्युनिष्टको कुशासन र बेथिति जुन जनताले देखेका छन् त्यसको पनि भण्डफोर गर्ने । नेपाली कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था हामीले पार्टीलाई पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अबका सबै चुनावहरूमा कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्छ । त्यही ढङ्गबाट अब पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ । अहिले पार्टीले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा निर्वाचनको एक प्रकारको तरङ्ग आएको छ, यसलाई अबका निर्वाचनहरूसम्म नै पुर्‍याउनुपर्छ र अब आउने सबै निर्वाचनहरूमा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यी सबै कामलाई महामन्त्रीजस्तो पार्टीको सक्रिय पदाधिकारीमा रहेर मैले अगाडि बढाउने छु ।
नेपालप्रति हाम्रा मित्र तथा शक्ति रष्ट्रहरूको ठूलो सद्भाव छ । तर पनि यसको फाइदा हामीले लिन सकेका छैनौँ । हाम्रो यस्तो प्रवृत्ति छ कि राष्ट्रवादका ठूला कुरा जनतातर्फ फर्केर गर्ने र नारा लगाउने तर सम्बन्धित ठाउँमा भने राख्न नसक्ने । यसैले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पनि पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ र उता हाम्रा मित्र रष्ट्रहरूको सद्भाव प्राप्त गर्न पनि सकेक छैनौँ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा या यहाँले भनेजस्तै पछिल्लो पटक भारतको भ्रमण गर्दा पनि यी पक्षहरूलाई थप स्पष्ट पार्ने काम मैले गरेको छु । (रासस)
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८, १३:०७:५५